Inotakurika ruzha system ine iPod dock | Ndinobva mac
Inzwi system ine iPod dock
Pakati pevakawanda accessories iyo yatinogona kusanganisa yedu apuro zvigadzirwa, nhasi tichataura nezveinonakidza uye yakakwana inotakurika ruzha system ine iPod dock, el Samson Expedition XP40iw ine zvinhu zvinonakidza zvingangobata pfungwa dzako.
Pakutanga, izvi nyowani ndizvo yakagadzirirwa kushandiswa kana uchipa hurukuro kana makirasi, kana uchitungamira boka revashanyi, kana uchitungamira horo (isina kunyanya kukura, hongu), kana uchienda kumitambo yemitambo, zviitiko zvekunze nemhando idzi dzemisangano inokodzera kukwidziridzwa yezwi, saka uya ne maikorofoni zvaisanganisira. Iyo zvakare ine pakati pekushanda kwayo a woofer 6-inch, a gobvu 1-inch yakakwira frequency uye a amplifier 40watt kirasi D, simba rayo risingazvidzivise pakuita uye nyore kutakura.
El inotakurika ruzha system ine iPod doko Samson Expedition XP40iw Iyo ine kukosha muUnited States kwemadhora mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe emadhora, uye nekuda kweiyi kukosha uchawana yakazara gudzanzwi iyo inosanganisira a waya maikorofoni VHF, a iPod dhoku neyakaenzana kutonga, pamwe nekudzora mabass uye treble; Uye kana zvikasanzwika zvine hunyanzvi, iwe unofanirwa kuziva kuti zvine zvigadzirwa zvakaita seXLR - 1/4 inch nemutsara nhanho kana maikorofoni nechikafu Phantom kana iyo 3.5mm stereo yekubatsira yekuisa ine mutsara nhanho, kuwedzera kune yayo 1/4-inch yekuisa / yekubuda chinobatanidza iyo inogona kushandiswa kubatanidza maviri XP40iw uye kugadzira stereo system.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac makomputa » Accessories » Inotakurika ruzha system ine iPod dock